Okraina: Bilaogera Maneho Hevitra Momba Ny Fitànana Mafàna Fo Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2011 15:39 GMT
Tany amin'ny tapaky ny volana Aogositra tany, nampikorontan-tsaina ny fiarahamonina Okrainiana ny nisamborana an'i Irina Teplinskaya, ilay Rosiana mafàna fo amin'ny fampihenàna ny fiantraikan'ny zavamahadomelina, nitatitra ireo fampahalalam-baovao anaty tranonkala Rosiana [ru] fa notànan'ny polisy tao amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny tanàna misy azy, Kaliningrad, i Irina ary nampangaina ho mpanondrana zava-mahadomelina an-tsokosoko. Milaza ireo mpampihatra lalàna fa nahitàna pilina Methadone iray tany anatn'ny entany. Nanambara i Irina fa zavatra niniana nampidirina tany anaty entany ireo zava-mahadomeilna ireo. Vao tonga avy any Kiev, Okraina i Irina, toerana nanarahany fampianarana momba ny famerenana ho eny anivon'ny fiarahamonina.
Mpitarika mpiaro zon'olombelona diso fanta-bahoaka i Irina, izay miady ho an'ny zon'ny vahoaka Rosiana miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina mba hananany fahafahana mahazo anjara fitsaboana fanolo amin'ny Methadone. i Irina dia iray amin'ireo mpitarika ny Andrey Rylkov Foundation momba ny Fahasalamana sy ny Rariny Ara-Tsosialy sady mpikambana ao amin'ny Kaomity Mpitantana ny Tambajotra Eraziana Momba ny Fiantraikan'ny zava-mahadomelina
Manaiky ampahibemaso i Irina fa efa niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina nandritra ny 30 taona mahery. Zarainy amin'ireo lahateniny ny tanaram-piainany, izay azo jerena ao amin'ny bilaogin'ny Rylkov Foundation, lahateny nandritra ny Vovonana Iraisam-pirenena ho fampihenana ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina, natao tany Beyrouth tain'ny Aprily 2011. Lehibe tanaty fianakaviana Sovieta (Rosiana) antonontonony, nanomboka nandray zava-mahadomelina teo amin'ny faha-14 taonany i Irina. Efa imbetsaka izy no nanandrana niala saingy tsy nahita fahombiazana. Noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny resaka zava-mahadomelina, dia 16 taona teo ho eo no laniny tany am-ponja. Avy amin'ny fampiasàna fitsindrona tsy voaaro, tratry ny aretina VIH, raboka sy Hepatite C izy. Rehefa nahazo fitsaboana tany aminà toeram-pitsaboana misahana ny raboka, nanomboka nanao asa fanampiana ho an'ireo hafa tratry ny aretina raboka sy VIH ary ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomeilna izy.
Ny tanjona fototra hitan'i Irina dia ny fanerena ny governemanta Rosiana hanaiky ny hampiasana ny opiacé (Avy amin'ny mpandika: kasinga azo avy amin'ny opium) ho fitsaboana fanolo, izay efa neken'ny ONU rahateo sady ampiasain'ireo firenena mandroso rehetra manerana izao tontolo izao. Miaro ny fampidirana ny fitsaboana fanolo ho an'ny Rosiana, tsy nitsahatra ny namerimberina ny antsony teny anoloan'ireo fitsarana samihafa ao amin'ny Federasionan'i Rosia i Irina, eny fa hatrany amin'ny Fitsarana Eraopeana momba ny Zon'Olombelona. Tamin'ny 2010, nametraka fitarainana iray i Irina tao amin'ny Iraka Manokan'ny Firenema Mikambana Momba ny Zon'ny Olona tsirairay hahazo ny tsara indrindra amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Irina dia anisan'ireo mpitarika ONG izay nihaona tamin'ny Kaomisera Ambony momba ny Zon'Olombelona, Navanethem Pillay nandritra ny fitsidihany an'i Rosia tamin'ny Febroary 2011.
Pavel Kutsev, bilaogera Okrainiana avy amin'ny tetikasa Drop-In Center tohanan'ny Rising Voices dia naneho hevitra momba ny fitànana an'i Irina sady nandalina ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny fandaharan'asa fametrahana ny fitsaboana fanolo ao Okraina. Pavel dia velon'ahiahy manokana amin'ny hoe ny fahatratrarana ilay pilina Methadone iray tsy mivaky dia mety hitarika ny mpitsabo hiverina amin'ny fomba fanao, fandevonana azy ireny ho vovony, alohan'ny hanomezany azy ny marary. Io fomba fanao io dia nialàna efa ho roa taona lasa izao taorian'ny ketsika nataon'ireo mafàna fo miady ho amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina. Hoy i Pavel manoratra:
Ilay bilaogera Slava avy amin'ny Fikambanan'ireo Mpiaro Ny Fitsaboana Fanolo ao Okraina na ny Association of the Substitution Treatment Advocates of Ukraine (ASTAU) dia naneho hevitra momba azy ity: